Udade Ufanele Athwale Xa Kutheni, Yaye Ngoba? | UThando LukaThixo
Udade Ufanele Athwale Xa Kutheni, Yaye Ngoba?
Udade ufanele athwale nini kwizinto eziphathelele unqulo, yaye ngasiphi isizathu? Makhe siphawule oko kwathethwa ngumpostile uPawulos ngalo mba. Usinika ulwalathiso olunokusinceda senze izigqibo ezifanelekileyo nezinokusenza sizukise uThixo. (1 Korinte 11:3-16) UPawulos usichazela ngezinto ezintathu esifanele sicinge ngazo: (1) izinto ezifuna ukuba udade athwale, (2) iimeko afanele athwale kuzo (3) nezinto ezifanele zimenze awuthobele lo myalelo.
Izinto afanele athwale xa ezenza. UPawulos uchaza ezimbini: ukuthandaza nokuprofeta. (Indinyana yesi-4 neyesi-5) Ukuthandaza kukuthetha noYehova. Namhlanje, ukuprofeta kuthetha ukufundisa nayiphi na imfundiso esekelwe eBhayibhileni. Noko ke, ngaba uPawulos uthetha ukuba udade ufanele athwale ngalo lonke ixesha ethandaza okanye efundisa inyaniso yeBhayibhile? Akunjalo. Yonke le nto ixhomekeka kwimeko udade athandaza okanye afundisa kuyo.
Iimeko. UPawulos uchaza iimeko ezimbini anokuthwala kuzo—ekhaya nasebandleni. Uthi: “Intloko yomfazi yindoda . . . Wonke umfazi othandaza okanye oprofeta intloko yakhe ingenasigqubuthelo uhlazisa intloko yakhe.” (Indinyana yesi-3 neyesi-5) Kwilungiselelo lentsapho, ngumyeni omiselwe nguYehova ukuba abe yintloko yomfazi. Ebeya kumhlazisa umyeni wakhe ukuba ebenokusingatha iimbopheleleko uYehova azinike umyeni ukuba ebengayi kubonisa ukuba uyazithoba kwigunya lakhe. Ngokomzekelo, ukuba bekunokunyanzeleka ukuba aqhube isifundo seBhayibhile ekho umyeni wakhe, ebeya kuzithoba kwigunya lakhe ngokuthwala. Ebeya kuyenza loo nto enoba umyeni ubhaptiziwe okanye akabhaptizwanga, kuba uyintloko yentsapho. * Xa kufuneka athandaze okanye afundise ekho unyana wakhe obhaptiziweyo osephantsi kolwalathiso lwabazali, bekuya kufuneka athwale, kungengenxa yokuba eyintloko-ntsapho, kodwa ngenxa yegunya elinikwe abazalwana ababhaptiziweyo kwibandla lamaKristu.
UPawulos uchaza imeko yasebandleni, esithi: “Ukuba nawuphi na umntu ubonakala ephikisa ngenxa yelinye isiko, thina asinalo elinye, engenalo namabandla kaThixo.” (Indinyana ye-16) Ebandleni lamaKristu, ngabazalwana ababhaptiziweyo abanikwe ubuntloko. (1 Timoti 2:11-14; Hebhere 13:17) Ngamadoda kuphela amiselwa njengabadala nezicaka zolungiselelo ukuze afeze imbopheleleko ayinikwe nguThixo yokunyamekela umhlambi wakhe. (IZenzo 20:28) Noko ke, iimeko zinokufuna ukuba udade acelwe ukuba asingathe imbopheleleko ebiya kusingathwa ngumzalwana obhaptiziweyo ofanelekayo. Ngokomzekelo, kusenokufuneka aqhube intlanganiso yentsimi kuba engekho umzalwana obhaptiziweyo ofanelekayo. Okanye kusenokufuneka aqhube isifundo seBhayibhile asilungiselele kwangaphambili phambi komzalwana obhaptiziweyo. Ngenxa yokuba la malungiselelo eyinxalenye yebandla lamaKristu, uya kuthwala ukuze abonise ukuba usingatha imbopheleleko ebiya kwenziwa ngumzalwana.
Kwelinye icala, kukho izinto ezininzi eziphathelele unqulo ezingafuni ukuba udade athwale entloko. Ngokomzekelo, akuyomfuneko ukuba athwale xa ephendula kwiintlanganiso zamaKristu, xa ekwindlu ngendlu nomyeni wakhe okanye nomnye umzalwana obhaptiziweyo, okanye xa efundela okanye ethandaza nabantwana bakhe abangabhaptizwanga. Ikho neminye imibuzo enokuphakama, ibe xa udade engaqinisekanga ngayo, unokwenza uphando. * Ukuba nasemva kwalo akakaqiniseki kwaye nesazela sakhe siyamvumela, kubhetele athwale njengokuba kubonisiwe kulo mfanekiso.
Izinto ezifanele zenze udade athwale. Kwindinyana ye-10, kuchazwa izizathu ezibini zokuba udade athobele lo myalelo: ‘Umfazi ufanele abe nomqondiso wegunya phezu kwentloko yakhe ngenxa yeengelosi.’ Okokuqala, phawula amazwi athi, ‘umqondiso wegunya.’ Ukuthwala yindlela udade abonisa ngayo ukuba uyalithobela igunya uYehova alinike amadoda abhaptiziweyo ebandleni. Ngenxa yoko, xa ethwala, ubonisa ukuba uyamthanda uYehova uThixo yaye unyanisekile kuye. Isizathu sesibini sifumaneka kumazwi athi “ngenxa yeengelosi.” Ukuthwala kukadade kudibana njani nezi zidalwa zomoya zinamandla?
Iingelosi zinomdla wokubona igunya likaThixo lithotyelwa kuyo yonke intlangano yakhe, ezulwini nasemhlabeni. Nazo ziyangenelwa xa zibona abantu abangafezekanga besiba yimizekelo kulo mba. Kaloku nazo kufuneka zizithobe kwilungiselelo likaYehova—nto leyo eziye azayenza ezininzi zazo kwixesha elidluleyo. (Yude 6) Iingelosi zinokubona iimeko apho udade enamava, enolwazi yaye ekrelekrele kunomzalwana obhaptiziweyo; kodwa ezithoba ngokuzithandela kwigunya lakhe. Kwezinye iimeko, loo dade sukuba engumKristu othanjisiweyo oza kuthi kamva abe ngomnye weendlalifa kunye noKristu. Loo dade ekugqibeleni uya kuba kwisikhundla esingaphezulu nakweseengelosi, alawule kunye noKristu ezulwini. Ngokwenene bamisela umzekelo omhle kwiingelosi! Bonke oodade banelungelo elikhethekileyo lokubonisa ukuthobeka nokunyaniseka phambi kwezigidi zeengelosi ezithembekileyo!
^ isiqe. 3 Ngokuqhelekileyo umfazi ongumKristu akayi kuthandaza ngokuvakalayo umyeni wakhe ongumKristu ekho, ngaphandle kwaxa kukho iimeko ezingaqhelekanga, njengaxa umyeni engakwazi ukuthetha ngenxa yokugula.
^ isiqe. 2 Ukuze ufumane ingcombolo, bona IMboniselo kaFebruwari 15, 2015, iphepha lama-30; ekaJulayi 15, 2002, iphepha lama-26 ukuya kwelama-27, neka-Agasti 15, 1977, iphepha lama-380 ukuya kwelama-383.